Shaxda & safka ay AC Milan doonayso inay lasoo shirtagto kal-ciyaareedka xiga ee 2017-18. – Gool FM
Shaxda & safka ay AC Milan doonayso inay lasoo shirtagto kal-ciyaareedka xiga ee 2017-18.
Raage May 31, 2017
(Milano) 31 Maajo 2017 – Ujeedka kooxda AC Milan ee fasal-ciyaareedka soo aaddan wuu cad yahay, waana inay dib ugu soo laabato Koobka ay caanka ku tahay ee Champions League, waxayna shalay qandaraaska u kordhisey Vincenzo Montella si ay suuqa diiradda u saaraan, iyadoo uu maareeyaha ciyaaraha ee Milan uu yiri: ”Montella fadlan telefoonka ha daminin” isagoo ula jeeda inay aad mashquul ugu ahaan doonaan suuqa kala iibsiga.
Kooxda Milan oo sanadkan ka qayb qaadan doonta Europa League, oo ay isku sii kululayn doonto maaddaama ay 3 sano ka maqnayd Yurub ayaa durba keensatay laacibiin ay ka mid yihiin Mateo Musacchio oo rasmi usoo wareegey iyo Franck Kessié oo haatan caafimaadka maraya, waxaana jidka kusoo jira Riccardo Rodriguez iyo ugu yaraan 3-4 laacib oo kale oo uu ka mid yahay weerar yahan muhim ah.
Haddaba, AC Milan oo suuqa ku bixin doonta lacag ka badan 150 milyan oo euro ayaa doonaysa inay dhisto koox tartami karta maxalli iyo caalami ahaanba, waxaana lagu wadaa inuu safkeedu u ekaado qaabkan.
Juventus oo €50m ku baadi goobaysa Federico Bernardeschi
“Offside ma ahayn goolkii aan Champions League uga qaadnay Juventus.”.